ညစ်ညမ်းစီမံကိန်း ညစ်ညမ်း၏ကန ဦး အာရုံစူးစိုက်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်လေထုအသံအတိုးအကျယ် (m3 / h) 1h ဖယ်ရှားမှုနှုန်းအလုပ်လုပ်သည် (%)
Formaldehyde (HCHO) 0.96 ~ 1.44mg / m3 >4800 ၉၀.၄%
Toluene (C7H8) 1.92 ~ 2.88mg / m3 >4800 ၉၁.၄%
စုစုပေါင်းမတည်ငြိမ်သောအော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများ (TVOC) 4.8 ~ 7.2mg / m3 >4800 92.2%
အမှုန်များ 0,70 ~ 0.85mg / m3 >4800 99.9%
ဇီဝသက်ရှိများ GB ကို 21551.3 အရသိရသည် >4800 99.9%
စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများ - ၁၂ မီတာကျယ်သောခရီးသည်တင်ကား၊ အငွေ့ပျံပန်ကာ ၆ ခု၊ အများဆုံးလေစီးဆင်းမှုလည်ပတ်မှု၊
ခိုင်ခံ့သောအိုင်းယွန်းများသည်အလွန်အားကောင်းသော Redox စွမ်းရည်ရှိသည်။ မော်တော်ယာဉ်အတွင်းရှိ Formaldehyde, methane, ammonia နှင့်အခြားမတည်ငြိမ်သောအနံ့ဓာတ်ငွေ့ (VOC) များကိုအောက်စီဂျင်၊ ရေနှင့်အောက်စီဂျင်များသို့ဓာတ်တိုးခြင်းနှင့်ပြိုကွဲခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၁ နာရီလည်ပတ်ပြီးနောက်ဖယ်ရှားမှုနှုန်းသည် ၉၅% သို့ရောက်သည်။
On-sit စမ်းသပ်မှု - ၂၅ မိနစ်နက်ရှိုင်းသောသန့်စင်ပြီးနောက် PM2.5 ကို ၇၅၉ μg / m3 (ခြောက်တန်းမိုးသည်းထန်စွာညစ်ညမ်းမှု) မှ ၃၃ μg / m3 (ပထမတန်းစားလေအရည်အသွေး) သို့လျှော့ချခဲ့ပြီးလေအရည်အသွေးသည်သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည် တိုးတက်လာသော
၁။ တွဲဖက်တည်ရှိမှုတွင်အိုဇုန်းထုတ်လုပ်မှုပမာဏသည် ၀.၅၅ppm ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် ၀.၁၅ppm ၏လုံခြုံမှုတန်ဖိုးထက်များစွာလျော့နည်းသည်။ မိနစ် ၃၀ အကြာတွင်ပိုးကင်းမှုနှုန်းသည် ၉၉% သို့ရောက်သည်။
(၂) ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သည်ထိတွေ့နိုင်သောစွမ်းအားမရှိပါ။ ၎င်းသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတိုက်ရိုက်ဓါတ်ရောင်ခြည်မကျရောက်ပါကအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ခရီးသည်များနှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုမှကာကွယ်ရန်ခရမ်းလွန်ပိုးကင်းဆီမီးခွက်နှင့်အခန်းကြားရှိ photocatalyst အလွှာတစ်ခု၊ စီစစ်သည့်အလွှာနှင့်ကင်တံခါးတံခါးများရှိသည်။ လုံခြုံစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
အိုဇုနျးအာရုံစူးစိုက်မှု ပိုး 0.05PPM အာရုံစူးစိုက်မှု rateat 0.1PPM အာရုံစူးစိုက်မှု rateil ပိုး
လည်ပတ်ချိန် 15 မိနစ် မိနစ် ၃၀ 15 မိနစ် မိနစ် ၃၀
Staphylococcus aureus ၇၅.၁% 86.3% 81.8% 98.2%
အူရောင်ငန်းဖျား bacillus ၉၁.၂% 95.5% 95.9% ၉၉.၄%
သဘာဝကိုလိုနီ 93.7% 99.8% 98.6% 99.9%
စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများ။ 200L ပိတ်ထားသောကွန်တိန်နာအတွင်းရှိပိုးကင်းသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ပိုးကင်းမှုနှုန်းကို 0.05ppm နှင့် 0.1ppm O3 ပြင်းအားကိုစစ်ဆေးရန်။
၁။ အဓိကနည်းပညာ ၄ ခု
ပစ္စည်းများ Electrostatic ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းခြင်း (PM2.5) ခရမ်းလွန်မီးခွက် ionizer Photocatalyst filter
ပိုးသတ် × √ √ √
VOC ဖယ်ရှားပါ √ × √ √
၂ ။ ခိုင်ခံ့သောအိုင်း photocatalytic polymerization နည်းပညာ, လူ့စက်အတူတကွ, ပိုးသန့်ဆေးနှင့်ပိုးသတ်:
UVC ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ တက်ကြွသောအောက်စီဂျင်၊ အိုင်းယွန်းအိုင်းယွန်းနှင့် photocatalytic polymerization နည်းပညာတို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောစီးပွားဖြစ်အိုင်းယွန်းနည်းပညာသည်ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ဘက်တီးရီးယားများအားအပြည့်အဝနှင့်လျင်မြန်စွာသတ်ဖြတ်နိုင်ပြီးရောဂါပျံ့နှံ့ခြင်းကိုတားဆီးသည်။ ပိုးကင်းမှုနှုန်းမှာ ၉၉.၉%၊ ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားမှုနှုန်းသည် ၉၉.၉% ဖြစ်သည်။ မော်တော်ကားအခန်းတွင်းရှိ formaldehyde, benzene, ammonia နှင့်အနံ့အမျိုးမျိုး၊ မီးခိုးနှင့်အနံ့စသည့်အန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့များကိုထိရောက်စွာဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အစက်အပြောက်များမရှိသောလူ - စက်နှင့်အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်း၊
၃ ။ ခရီးသွားခြင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုဖယ်ရှားရန်အတွက်လေထုအောက်စီဂျင်အိုင်းယွန်းများကိုဖြည့်စွက်ပါ။
၄ ။ လေသန့်ရှင်းခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့များပြိုကွဲခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းကင်းသော၊
လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ထားသည့် grille အတွင်း၌တပ်ဆင်ထားပြီးသေးငယ်သောအရွယ်အစားသည်အခန်းတွင်းရှိညစ်ညမ်းသောဓာတ်ငွေ့များကိုပြင်းထန်စွာပြိုကွဲပျက်စီးခြင်း၊ PM2.5၊ PM10 ဆိုင်းထိန်းထားသောအမှုန်များကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ လေထုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလတ်ဆတ်သောကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်စေခြင်းအားဖြင့်အပိုဆောင်းနေရာမရှိပါ။ အသုံးပြုမှုစဉ်အတွင်းအသုံးအဆောင်များ, Maintenance အခမဲ့။
၅ ။ အဝေးမှစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသတိပေးခြင်း၊
၎င်းကိုယာဉ်တစ်ခုလုံး၏ CAN လိုင်းနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး dashboard ပေါ်ရှိလေအရည်အသွေးအရည်အသွေးအာရုံခံကိရိယာအချက်အလက်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီစစ်ဆေးနိုင်သည်။ သန့်စင်စက်၏အလုပ်လုပ်ပုံကိုအသိဉာဏ်ပြောင်းခြင်းနှင့်အချိန်နှင့်အမျှလုံခြုံမှုဆိုင်ရာသတိပေးချက်ကိုသိရှိနိုင်သည်။ လေအရည်အသွေး။ ပြန်လာသည့် ၀ င်းဒိုးတွင်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်သောမျက်နှာပြင် (PM2.5 အမှုန်များအာရုံစူးစိုက်မှု၊ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆနှင့်လေအရည်အသွေးညွှန်းကိန်းများရှိနိုင်သည်) သည်ခရီးသည်များသည်ကားပတ် ၀ န်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုအခြေအနေကိုပြသခြင်းအားဖြင့်လူတို့အားပိုမိုကောင်းမွန်သောအဆင့်အတန်းဖြစ်စေရန်ခွင့်ပြုသည်။ နှင့်အသွင်အပြင်အတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့။
၆ ။ မြင့်မားသောအလုပ်လုပ်ထိရောက်မှု, စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနိမ့်, မော်တော်ယာဉ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသို့မဟုတ် cruising အကွာအဝေးအပေါ်အနည်းငယ်မျှသာသက်ရောက်မှု။
"Dynamic polarization" mode သည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောသန့်စင်မှုစွမ်းရည်ကိုအာမခံသည်။ ဖုန်မှုန့်များသည်စွမ်းဆောင်ရည်တူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက်အဆပေါင်းများစွာပိုများသည်။ ခရီးသည်တင်ယာဉ်၏စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုစနစ်နှင့်ကိုက်ညီပြီး ၁၂ မီတာဘတ်စ်ကား၏ပိုးသတ်ဆေးသန့်စင်ကိရိယာ၏ပါဝါစားသုံးမှုသည် 10W သာရှိပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောစွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ သာမန်နှင့်လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားများတပ်ဆင်ထားသည်။
1 ဖယ်ရှားမှုနှုန်း(၁ နာရီ) 99.9%
2 Formaldehyde ဖယ်ရှားမှုနှုန်း (၁ နာရီ) ၉၀.၄%
3 Toluene ဖယ်ရှားမှုနှုန်း(၁ နာရီ) ၉၁.၄%
4 ဖယ်ရှားမှုနှုန်း(၁ နာရီ) 92.2%
5 Xylene ဖယ်ရှားမှုနှုန်း(၁ နာရီ) 93.0%
SONGZ Air Purifier ၏အဓိကယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း
ပေါင်းစည်းသန့်စင် function ကို
လေဝင်လေထွက်လိုအပ်ပါသလား ပရိတ်သတ်များကလေဝင်လေထွက် အဘယ်သူမျှမပိတ်ဆို့
လေသန့်စင်နည်း ၁။ ခိုင်ခံ့သောလေထုသန့်စင်စနစ်၂။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအိုဇုန်းလွှာ module (ရွေးချယ်နိုင်သည်)3. ပေါင်းစည်း electrostatic ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေး
4. ပေါင်းစည်း photocatalyst filter ကို
1. ယာဉ်ခရမ်းလွန်ဆီမီးခွက်ပိုးသတ်2. ပိုးသတ်ဆေးဖြေရှင်းချက်ဖျန်း
အဓိကယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း ၁။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်း၊ ယာဉ်ကိုအနည်းငယ်ပြောင်းလဲခြင်း
2. ဗက်တီးရီးယားအမျိုးမျိုး၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ဖုန်မှုန့်များနှင့်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သောအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဓာတ်ငွေ့များကိုထိရောက်စွာဖယ်ရှားနိုင်သည်
(၃) သန့်စင်စက်၏စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်သည်နိမ့်သည်။ အကယ်၍ ပိုမိုမြင့်မားသောအိုဇုန်းလွှာတပ်ဆင်မှုကိုသင်တပ်ဆင်လိုပါက ၁၀၀ ထက်ပိုသောကုန်ကျစရိတ်ကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သည်။
၄။ ခရီးသည်များကိုသယ်ဆောင်ရာတွင်လေသန့်သန့်ရှင်းရေးကိုဖွင့်နိုင်သည်။ လေသန့်သန့်ရှင်းရေးကိုယ်တိုင်သည်အချိန်နှင့်အမျှပိုးကင်းမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်အတွက်အနည်းဆုံး O3 (0.02ppm ခန့်၊ အန္တရာယ်ကင်းသောအကွာအဝေးအတွင်း) ကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
၅။ ယာဉ်တစ်ခုလုံးအတွက်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးလိုအပ်လျှင်၊ ယာဉ်မဖွင့်မီသို့မဟုတ်ကားထဲတွင်အဘယ်သူမျှမရှိသည့်အခါတိုးမြှင့်သောအိုဇုန်းလွှာ mode ကိုဖွင့်သည်။ ၁၅ မိနစ်အကြာတွင်အလိုအလျောက်ရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။ နှင့်စွမ်းအင်ချွေတာ။
၆။ အအေး၊ အပူနှင့်လေဝင်လေထွက်စနစ်များကိုမဖွင့်ပါကပိုးသတ်စနစ်၏ပန်ကာကို ၅ မိနစ်အလိုအလျောက်စတင်ပြီးမိနစ် ၂၀ လုံးလုံးရပ်ပါမည်။ ၁။ မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးလုံးအပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားရှိပါက၎င်းတွင်အပိုခရမ်းလွန်မီးချောင်းများတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပြီးပိုးသန့်ဆေးရေမှုန်ရေမွှားစနစ်တစ်ခုလုံးကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းစီမံကိန်းသည်ကြီးမားပြီးကုန်ကျစရိတ်လည်းမြင့်မားသည်။
၂။ ဗက်တီးရီးယားပိုးနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကိုသန့်ရှင်းနိုင်သည်။ သို့သော်ဖုန်နှင့်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သောအန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့များကိုကောင်းမွန်စွာကုသနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
၃။ ခရီးသည်များကိုသယ်ဆောင်ရာတွင်လေသန့်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပိုးသန့်ဆေးကိုခွင့်မပြုပါ။ ပိုးသတ်ဆေးလုပ်ပြီးပါကလေဖလှယ်ရန်လိုအပ်သည်၊
လက်ရှိတွင်၎င်းသည် Xiamen Jinlong နှင့် Zhengzhou Yutong စသည့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်မော်ဒယ်လ်များ၏သုတ်ဆေးများဖြင့်ရောင်းချသည်။
ဘတ်စ်ကား A / C
နှစ်ထပ်နှစ်ထပ်ဘတ်စ်ကား A / C